Ho An’ny Mpitari-Pivavahana Ao Arabia Saodita, Tsy Ny Tany No Mihodina. Ho An’ny Hafa, Ny Masoandro No Mihodidina Ny Tany · Global Voices teny Malagasy
Ho An'ny Mpitari-Pivavahana Ao Arabia Saodita, Tsy Ny Tany No Mihodina. Ho An'ny Hafa, Ny Masoandro No Mihodidina Ny Tany
Voadika ny 18 Febroary 2015 4:06 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, ଓଡ଼ିଆ , Español, Català, English
Tao anaty lahatsary ao amin'ny Youtube no nilazan'ny Sheikh Bandar al-Khaibari, mpitari-pivavahana ao Arabia Saodita fa tsy mihetsika ny Tany ary tsy mihodina manodidina ny masoandro. Nopaingorin'ny fahitalavitra Al Arabyia an-dry zareo Saodiana ilay tantara rehefa nivezivezy be tety anaty media sosialy, ary nalefany ho hitan'izao tontolo izao. Loharanon-tsary: dika nalaina tamin'ny lahatsary tao amin'ny fahitalavitra Al Arabiya
Tsy misy fomba mihitsy hahafahan'ny Tany hihodina an-toerana eo, hoy ilay Saodiana mpitari-pivavahana – Sheikh Bandar al-Khaibari – izay manindry milaza fa mijanona eo amin'ny misy azy ny planeta misy antsika. Voarakitra anaty lahatsary iray ny fanazavàna nataony, izay toa avy aminà kaonferansa iray, izay nitenenana fa raha toa ka mihodina marina tokoa ny Tany, ahoana no ahafahan'ny olona iray manday fiaramanidina hamonjy an'i Shina.
Toy izao no tena nolazainy :
Amin'ny maha-Miozolmana antsika dia manana atidoha isika. Voalohany indrindra, aiza moa isika? Raha mankany amin'ny seranam-piaramanidina Sharjah isika ka te-ho any amin'ny seranam-piaramanidina any Shina, amin'ny alàlan'ny fiaramanidina… mazava ve izay? Tiako hifantoka miaraka amiko ianareo .. Ity ny Tany [zavatra tazoniny eny an-tànany], raha lazainareo fa mihodina izy ity, raha miala ao amin'ny seranam-piaramanidina Sharjah isika ka hisidina ho any amin'ny seranam-piaramanidina ao Shina, ary mihodina ny Tany, ao an? Araka izany, raha mijanona eo ambony habakabaka eo ilay fiaramanidina, tsy ho avy eo aminy ve i Shina? Marina sa diso? Raha mihodina izy, ho avy eo Shina sa tsia? Raha mihodina tahaka izany ny Tany, ary manidina ny fiaramanidina, tsy ho tonga any Shina mihitsy ianareo, satria mihodina i Shina ary mihodina ianareo. Fomba ahoana no hahatratraranareo an'i Shina?
Eto ilay lahatsary no zarain'i Ahmed Zayed ao amin'ny YouTube :
Ary ny fahitalavitra Saodiana Al Arabiya, izay nandefa ilay tantara taorian'ny nivezivezeny be tao amin'ny media sosialy, dia nandika eto ilay lahatsary [io jerena raha hijery ny dika amin'ny teny Anglisy].
Ao amin'ny Twitter, mampifanjevo ny Saodiana ny hoe mihodina amin'ny tenany ve ny Tany sa ny masoandro, amin'ny fampiasàny ny tenifototra #داعية_ينفي_دوران_الأرض, izay midika hoe #mpitaripivavahana_mandà_nyTany_mihodina.
Fa nandeha lavidavitra kokoa ny adihevitra, miaraka amin'ireo maro izay milaza fa ny Masoandro no mihodidina ny Tany izay tsy mihetsika.
Avy ao Arabia Saodita, fongarin'i Naifco ary zarainy ao amin'ny Twitter ity fatwa (didim-pinoana) ity, izay milaza koa fa tsy mihodina ny Tany, ary ny masoandro no mihodina manodidina azy. Efa ho maherin'ny in-500 ity bitsika ity no nifampizarana hatreto :
Araka ny fatwa, [avy amin'ny Sekretera Jeneraly Maharitry ny Fatwa ao Arabia Saodita], izay nomena ho valinteny tamin'ny fanontaniana napetraky ny mpampianatra iray, dia ny Masoandro no mihodidina ny Tany, fa tsy ny mifanohitra amin'izay:
Fanontaniana 3: Mandritry ny fampianarana siansa dia mampianatra aho fa : Mihodina manodidina ny Masoandro ny Tany ary hatramin'ny nahenoako ny voalazan'ny Sheikh Abu Bakr Al Jazaeri fa hoe ny masoandro no mihodidina ny Tany, dia tokony hatahotra an'i Allah ireo rehetra mampianatra an'io taranja io. Loza mitatao ho an'ny finoany io satria lasa fandàvana imasom-bahoaka ny fivavahany ny taranja ampianariny. Nohazavaiko tamin'ireo mpianatro izany taorian'ny fampianarana. Mety ve sa diso ny nataoko? Miangavy mba ampahafantaro ahy, Allah anie hamaly fitia anao.
Valiny 3: Marina izay lazain'ny Sheikh Abu Bakr. Tsy mihetsika ny Tany ary ny masoandro no mihodina manodidina azy.
Vokatry ny fizarana ity fatwa ity, niharan'ny taimbavan'ny mpamaky azy ity mpitoraka bilaogy bitika ity, mpamaky izay tonga hatramin'ny fanompàna azy noho ny fanesoesoana ny finoana, raha toa ka ny nibitsika ilay fatwa fotsiny no hany nataony, izay manilika ny fampianaram-pinoana Saodiana izay milaza fa ny Tany no mihodina manodidina ny masoandro.
Avy ao Riyadh, renivohitr'i Arabia Saodita, ampahatsiahivin'i Musfer ben Ali an'ireo 8.5K manjohy azy hoe:
Mba ho fampahafantarana ho anao, ny filazana ofisialy mifanaraka amin'ny Sharia ao Arabia Saodita dia tsy mihodina ny Tany. Namerina fotsiny ny zavatra nampianarina azy no nataon'io lehilahy io
Na teo aza io, dia gaga i Akram Wadidi fa mbola misy ihany olona ao amin'ny Twitter miaro ny fanambarana nataon'ilay mpitari-pivavahana :
Ny hafahafa dia izao, misy olona miaro ilay mpitari-pivavahana izay nilaza fa tsy mihetsika ny Tany ary tsy mihodina. Tsy iray na roa….tena marobe
Ary avy any Dubai, manamarika i Hazza Al Marri ho an'ireo 1.200 manjohy azy :
Tsy mihetsika ny Tany ary tsy mihodina manodidina ny Masoandro ary na iza na iza miteny zavatra hafa ankoatra an'io dia “olona hendry mahalala ny lazainy, nefa tsy misy olona hihaino azy eo”!!
Mandria am-piadànana ry Galileo Galilei — ilay Italiana mpandinika ny any amin'ny tsy taka-maso any, nahita, notsaraina “ho nitompo teny fantatra nanohitra ny efa nipetraka”, noterena hiala amin'ny heviny, ary nandany ny sivy taona farany niainany mandra-pahafatiny tamin'ny 1642 tany am-ponja ho fiarovana ny teorian'ny heliocentrism (=mihodina manodidina ny masoandro ny zavatra rehetra).